I-Osteoarthritis (Osteoarthritis) - Vondt.net
Ugcino lodidi: Osteoarthritis (Osteoarthritis)
Amanqaku kwi-Osteoarthritis (Osteoarthritis)
Apha sibonisa isishwankathelo esinolwazi ngokwamanqaku ahlukeneyo esiye sawabhala malunga nesifo samathambo (isifo sokuqaqanjiswa kwamalungu). I-Osteoarthritis ikwabizwa ngokuba sisifo samathambo kwaye kubandakanya ukungahambi kakuhle, ukuwohloka, kunye nokunxiba nokudibeneyo.
Amanqaku ethu kwi-osteoarthritis kunye nokunxiba okudibeneyo kubhalwa ngabaqeqeshi bezempilo abagunyazisiweyo ngendlela yee-chiropractors kunye ne-physiotherapists.
Iimpawu ezi-6 zokuqala zeOsteoarthritis
06 / 10 / 2018 /0 Amazwana/i I-Osteoarthritis (Osteoarthritis), rheumatism/av ubuhlungu
I-Osteoarthritis yaziwa ngokuba yi-osteoarthritis kwaye inxulumene nokunxiba okudibeneyo kunye nokutshatyalaliswa okuhlangeneyo. Ngale miqondiso mithandathu, unokufumana isifo samathambo kwinqanaba lokuqala -ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ngokunxulumene nonyango, ukutya kunye nokuzilolonga.
Osteoarthritis yimeko edibeneyo yomdibaniso ebangelwa kukunxiba. Njengoko usiya ukhula, i-cartilage efunxayo ngaphakathi kwamalungu inokuwohloka kwaye ibangele ithambo ukuba lihlambe ngokuchasene nethambo. Ukuqhekeka okunjalo kunokubangela ukuvuvukala kwamalungu achaphazelekayo. Iminwe, iinciniba, amadolo, iimeyile kunye neekona zezona ndawo zihlala zichaphazeleka yimithambo yamehlo.
Eli nqaku liza kudlulela kwiimpawu ezi-XNUMX zokuqala zeempawu zentsholongwane. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi, kunye nokubukela ividiyo yeendlela zokuzilolonga ezilungiselelwe abo bane-osteoarthritis yehip.
ICEBISO: Abantu abaninzi bayayisebenzisa iiglavu zoxinzelelo ezitshintshiweyo (Ikhonkco liyavula kwiwindows entsha) yokuphucula ukusebenza kwezandla neminwe. Oku kuqheleke kakhulu phakathi kwe-rheumatologists kunye nabo banengxaki ye-carpal tunnel syndrome. Mhlawumbi ikhona iinzwane zokutsala og ngokukodwa iisokisi zoxinzelelo ukuba ukhathazwa ziinzwane eziqinileyo nezibuhlungu- mhlawumbi ihallux valgus (inyawo elikhulu eliguqulweyo)
Ubuhlungu kumajoyina kunye nezihlunu ezikufutshane kunokuba luphawu lwangoko lweempawu zentsholongwane. Njengoko isifo se-osteoarthritis sikhula kwaye singena kwinqanaba lesigaba samathambo, omnye unokulindela ukunyuka kwentlungu edibeneyo kwindawo echaphazelekayo.
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokunxiba ngokudibeneyo kukuqinisa izihlunu ezomeleleyo. Ukuthintela okunjalo ngokuyintloko kuqinisa izihlunu ezikhulula amajoyina. Umzekelo, ukuqeqesha amathanga, isihlalo kunye nama hips kunokuba yindlela elungileyo yokunciphisa zombini i-arch kunye neyamadolo1). Le vidiyo ingezantsi ibonisa imizekelo yokuzivocavoca kwamathambo.
2. Uhlangulo loxinzelelo
Isifo samathambo kukuziva ungonwabanga xa umntu ecinezela okanye echukumisa ngokudibeneyo ochatshazelwa sisifo samathambo. Kumanqanaba alandelayo onyango lwesifo samathambo umntu unokuqaphela ukudumba kunye nokubomvu kumalungu achaphazelekayo.
3. Ukudibana ngokudibeneyo
Intlungu edibeneyo ikwabangela ukuqina ngokudibeneyo- okt kuncitshiswe ukusebenza kunye nokuhamba kwiindawo ezichaphazelekayo. Ewe kunjalo, kuyinto eqhelekileyo ukuba uqine kumalungu xa uqala ukuvuka kusasa-okanye emva kokusebenzela ikhompyuter imini yonke-kodwa inokuba luphawu lokuqala lwe-osteoarthritis.
Unyango olwenziwe ngezandla (njengokunyanga ngokudibeneyo kunye nonyango lokuthambisa) lubonakalisile ubuchule ekuphuculeni umsebenzi kunye nokuhambahamba kwamalungu asezantsi, i-pelvis kunye namalungu entamo. Ukuba uyachaphazeleka kukuqina kwentsasa, sicebisa ngamandla ukuba uhambe kubomi bakho bemihla ngemihla kwaye uzibuze lo mbuzo: "Ngaba ndihamba kancinci emini?"
Kufuneka sikhumbule ukuba yintshukumo kunye nomsebenzi obangela ukuhamba kwegazi kwimisipha, imisipha kunye namalungu aqinile. Oku kujikeleza okwandisiweyo kuza kunye nokulungiswa kwezinto kunye neebhloko zokwakha ukuze umsebenzi wokugcina wenziwe kumalungu kunye nezihlunu ezidiniweyo.
Unyango olwenziwayo (olunjengonyango oludibeneyo kunye nonyango lokuqinisa imisipha), ukuzivocavoca kunye nokuziqhelanisa nokuthintela imithambo kubalulekile ekuthinteleni amalungu aqinile kunye nezihlunu eziqinileyo. Sicebisa ukuba usebenzise abasebenzi bezempilo abagunyazisiweyo esidlangalaleni abanezakhono kwiimisipha kwaye - imisebenzi emithathu enesi siqinisekiso eNorway yinyango yezonyango, i-physiotherapist kunye nonyango olusebenzayo. Ukuba ukufumanisa kunzima ukuqeqesha ngendlela yesiko- emva koko sinokucebisa uqeqesho kwichibi lamanzi ashushu.
4. Ukucofa, ukuKhahlela kunye nokuKhwela ngaphakathi kwiiJointi
I-cartilage engaphakathi kwamalungu kufuneka isebenze njengesixhobo sokuntywila ekuncedeni ekunciphiseni amalungu xa ushukuma. Ukuba le ntlala yaphulwe, ukungqubana kwethambo nethambo kunokwenzeka kwiimeko ezinzulu ngakumbi, kunye nezinye iimpawu zokudibana- njengokucofa, ukuqhaqha nokucofa iqhosha ngaphakathi kwilungu.
Umzekelo, ukuba ufumana ukuqhekezwa kunye nokuqunjelwa ngaphakathi kwamadolo adibeneyo njengoko uhamba omnye unokukwazi ukuxhaswa kwento edolo (ivula kwifestile entsha) ibe sisixhobo esiluncedo segalelo kuzinzo lwamadolo ngelixa isandisa ukujikeleza kwegazi kwendawo. Uninzi luza kuqala ngoqeqesho olwenziweyo ukuze komelezwe amajoyina ngendlela elungileyo nekhuselekileyo.
5. Ukucuthwa kokudibeneyo
Abantu abachaphazeleka sisifo samathambo, nokuba kwinqanaba lokuqala, banokufumanisa ukuba akukho lula kangako ukuba ushukuma. Ukudityaniswa kunye nokuqaqanjelwa kunokunceda ukunciphisa ukuguquguquka kunye nokushukumiseka kumalungu kunye nezihlunu.
Ukuhamba okungalunganga kungakhula ngakumbi njengoko isifo samathambo sisiba ngakumbi ngaphakathi kwamalungu achaphazelekayo. Kubalulekile ke ngoko ukuba usebenze ngokuchasene nolu phuculo ngokuthatha amanyathelo othintelo afana nohlengahlengiso kuqeqesho kunye namanyathelo okuzilungisa- kunye nalo naluphi na unyango lobuchwephesha ukuba luyafuneka.
6. Umahluko wemihla ngemihla kunye nokuqina kwentsasa
Mhlawumbi uqaphele ukuba ukudibanisa kwakho kubonakala ngathi kungakumbi malunga nokusa? Luphawu olibonakalayo lokuqaqanjelwa kwamalungu ukuba amalungu adityaniswa ngokuqaqamba nangakumbi entlungwini kunangexesha lokuqala kwentshukumo. Ukuba uziva ulukhuni kakhulu ekuseni kunangaphambili kunokuba luphawu lwangoko lweempawu zentsholongwane.
Nangona kunjalo, njengoko isifo samathambo sisiya siba mandundu ngakumbi, amaxesha eentlungu aya kuba mde kwaye rhoqo. Umzekelo, kusenokwenzeka ukuba ibikukubaleka kabuhlungu kuphela ngaphambili, kodwa ngoku uzifumana ngokwamahamba amancinci. Olunye uphawu lokuba i-osteoarthritis iyaphuhla kwaye kufuneka uthathe amanyathelo okhuselo ukunciphisa okanye ukuyekisa ukukonakala.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-tidlige-tegn-på-artrose.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-10-06 13:38:522021-03-24 13:58:11Iimpawu ezi-6 zokuqala zeOsteoarthritis
Iphepha loku-1 lama-41234